ဇွန်လ 1, 2010 တွင် 8:02 ညနေ
ယနေ့ငါအဆင့်မြှင့်… ဒါပေမယ့် plugin ကိုယခုဘာသာပြန်ဆိုကိုရပ်တန့်.
ဒါ့အပြင်ဘယ်လို URL ကိုအလုပ် traslating ပါဘူး? ကျွန်မတစ်ခုခုကိုဘာမှကြောင်းပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်မြင်ရ dont အဖြစ်.
ဇွန်လ 1, 2010 တွင် 8:28 ညနေ
URL ကိုဘာသာပြန်ချက်များဖြစ်ကြောင်း URL ကိုများ၏အစိတ်အပိုင်းများယူပြီးနောက်ကျောနှင့်ထွက်သူတို့ကိုဘာသာပြန်ဆိုရန်ကြိုးစား, ထိုစာမျက်နှာကိုဖန်တီးသောအခါထွက်သည်, အားလုံး urls သူတို့ရဲ့ဘာသာပြန်ချက်များကိုမှအစားထိုး, နှင့်နောက်ကျော, အသုံးပြုသူတစ်ဦးထိုကဲ့သို့သော url တောင်းဆိုပါသည်သည့်အခါဖြစ်ပါသည်, plugin ကို user ကိုအမှန်တကယ်ရည်ညွှန်းသောစာမျက်နှာ wordpress ကိုပြောပြ. သင်က setting တွင်ထိုသို့ထောက်ခံမှုတွေကို enable လုပ်ဖို့လိုအပ်.
plugin ကိုဘာသာပြန်ဆိုရပ်တန့်အဘယ်ကြောင့်ငါကိုစစ်ဆေးပျော်ရွှင်ဖြစ်ရလိမ့်မည်, ငါမူကားကြည့်ရှုရန်အချို့သော URL ကိုလိုအပ်ပါတယ်…
ဇွန်လ 1, 2010 တွင် 8:06 ညနေ
URL ကို၏ဘာသာပြန်စာပေ!!- ငါဘာသာပြန်ချက်တကယ်တော့ useable ခဲ့ plugin ကိုယနေ့အဘို့အလှည့်ပတ်ရှာကြပြီ (ထိုနေ့၌ပင်သင်တို့သည် url ဘာသာပြန်ချက် version ကို release) ငါသည်သင်တို့၏ plugin ကိုဖြတ်ပြီးလာ – ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်!
ဖူးကကြည့်ရှုသည်ကြီးသောအလုပ်ဖြစ်တယ် – ထွက်ရှိဘာမှထက်ပိုကောင်း.
– url ဘာသာပြန်ချက်
– တူညီတဲ့ထုံးစံအညွှန်း settings ကိုစောင့်ရှောက်
– တပင်ကိုမျှ Seo meta နှင့်ဖော်ပြချက်များအားလုံးပြောင်းလဲပေးမ!
ထူးဆန်းသော – ကျေးဇူးတင်ပါသည်…..
ဇွန်လ 1, 2010 တွင် 8:29 ညနေ
ဇွန်လ 2, 2010 တွင် 6:01 ညနေ
ဤကြီးစွာသော plugin ကိုမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်. ယနေ့ငါသစ်တဲ့ version ကအဆင့်မြှင့်. မျှော်လင့်ထားကြောင့်အလုပ်မလုပ်. သို့သော်လည်းငါသည်ထင်တချို့အသေးအဖွဲအမှားရှိပါတယ်.
ငါ့ website တွင်အသုံးပြုသည့် default ဘာသာစကား Bahasa Indonesia ဖြစ်ပါသည်. အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းပြီးနောက်, က admin ရဲ့စာမျက်နှာမှာပြောင်းလဲမယ့်နေစဉ်က frontend အပေါ်အင်္ဂလိပ်ဖြစ်လာမယ်.
ငါသည်အ admin ရဲ့စာမျက်နှာ၌ငါ၏ default ဘာသာစကားအဖြစ်အင်္ဂလိပ်ဘာသာလုပ်ရန်ကြိုးစားသလိုအလုပ်လုပ်. ထိုအခါ, Bahasa Indonesia ကနောက်ကျောကိုပြောင်းလဲ, ဒါပေမယ့် FrontPage နေဆဲပုံမှန်အားဖြင့်အင်္ဂလိပ်စာကိုပြသဖို့.
ငါပြုသည်မဟုတ်ရှိရာအမှားအတိအကျ. ယခုစာအုပ်ကိုရေးသားနေစဉ်တုန်းပဲကခြေရာခံပါ၏. ဒါဟာ browser ကို cache မှလာမယ့်, ဒါပေမယ့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမစဉ်းစားကြဘူး.
ဇွန်လ 2, 2010 တွင် 7:01 ညနေ
ငါသည်အ Bahasa ၌သင်တို့၏ဆိုဒ်ကိုမြင်လျှင်ပါ၏, ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုသင်အင်္ဂလိပ်စာမျက်နှာကိုသင်ပို့ပေးရသောဘာသာစကား detection အင်္ဂါရပ်ကို enable လုပ်ထားပါပြီ, URL ကိုသင့်ရဲ့ address bar မှာပေါ်ပြောင်းလဲနေပါတယ်?
ဇွန်လ 2, 2010 တွင် 7:08 ညနေ
ယခုတွင်ငါသည်ကို default language နဲ့သူ့ရဲ့ဖြစ်နိုင်ပြဿနာတစ်ခုကိုမြင်ရ, ထိပ်မှ Basha ဆွဲကြိုးစားကျေးဇူးပြုပြီး, ဒါကြောင့်ပြောင်းသင့်. ဒါဟာအလုပ်မသွားလျှင်, ကျနော်တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ရပါလိမ့်မယ်
ဇွန်လ 3, 2010 တွင် 5:46 ညနေ
ပထမ, ငါသည်သင်တို့၏အကူအညီဘို့သင့်ကိုကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်ဒါပေမယ့်ငါ့က်ဘ်အကြောင်းကြားစာမပါဘဲကိုဆိုင်းငံ့ထားခဲ့ပြီးကြောင့်ယနေ့ခေတ်တော့ဘူးမရှိအကူအညီနဲ့င်. သင်ဘယ်လိုထင်ပါလဲ?
မလုပ်ပါနှင့်, ကျနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သင့်တဲ့ plugin င်ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်, တစ်ချို့ဒုက္ခရှိပါတယ်သိသောကြောင့်, ငါသည်ငါ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ပြုပြင်ပါ၏နေစဉ်အိမ်ရှင် server ကို admin ရဲ့ငါ့အကောင့်ကိုရပ်ဆိုင်းခဲ့သည်အဘယ်ကြောင့်ဒါပေမယ့်ကျွန်မစဉ်းစား, နှင့်လည်းအသိပေးခြင်းမရှိဘဲင်. ဒါဟာမမျှတဘူးင်, မဟုတ်ဘူးလား?
ဇွန်လ 2, 2010 တွင် 8:19 ညနေ
ဒီအစာရှောင်ခြင်းပြန်ကြားချက်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်. ကျွန်မအင်္ဂလိပ်စာကို default ဘာသာစကားပြောင်းသောအခါကျွန်တော် Bahasa အတွက်ယခုင်. ငါသည်အ Bahasa ဖို့ default ဘာသာစကားသတ်မှတ်ထားပါက, အဲဒါကို default အဖြစ်အင်္ဂလိပ်ပြသနေပုံင်.
ဇွန်လ 4, 2010 တွင် 1:36 ညနေ
ပို့စ်များ urls ၏ဘာသာပြန်ချက်နှင့်အတူ Awesome ကိုအလုပ်, ထို”အလွန်အသုံးတယ်နှင့် SEO ဆိုသည်မှာနှင့်အတူအလွန်ကူညီပေးပါမည်. သို့သော်အဘယ်အရာစာမျက်နှာများတွင်အကြောင်း? မှားယွင်းသော 'စာမျက်နှာငါမတွေ့ရ’ ကျနော်ပြန်ဆိုခဲ့သည်စာမျက်နှာတစ်ခု link ကိုနှိပ်တဲ့အခါ, ငါကလည်းတူပို့စ် urls ကောင်းရှိပါတယ်, သူတို့မဆိုအမှားများကိုတွေ့ရှိခြင်းမရှိဘဲလျက်ရှိ. အဘယ်ကြောင့်ဤဖြစ်ပေါ်နေသည်?
ဇွန်လ 4, 2010 တွင် 1:38 ညနေ
တစ်ဦးကအခြားအရာ, ငါမတွေ့တဲ့ 'စာမျက်နှာရသည့်အခါ’ အမှား, page ကို english ဘာသာပြန်ချက် default အားပြန်လည် reverts. ဒီနောက်တဖန်သူတို့ဘာသာစကား reselect မှရှိခြင်းဧည့်သည် annoy လိမ့်မယ်, တစ်တပ်ကြီးမြတ်ရလိမ့်မည်ဟု. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ဇွန်လ 13, 2010 တွင် 5:19 ညနေ
ဇွန်လ 14, 2010 တွင် 11:13 နံနက်
ကျနော်တို့ကအပေါ် fixed ထင် 0.5.4 (ဒီ hi ဥပမာခဲ့စာမျက်နှာများပေါ်တွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့ (မ) thier url အတွက်, ထိုသို့ထားသောတယ်) ဒါကြောင့်အခုထိဘာဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်, ့စမ်းသပ်ဖို့ငါတို့အဘို့အဦး url နှင့်အတူ reply.
တစ်နေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မနျးွခငျးမတောင်းပန်ပါတယ်, နှင့် godspeed
ဇွန်လ 5, 2010 တွင် 6:45 ညနေ
အမှားနားမလည်: syntax ကိုအမှား, မမျှော်လင့်ဘဲ $ အဆုံး၌ /home/****/public_html/starwallpaper.info/wp-content/plugins/google-sitemap-generator/sitemap-core.php လိုင်းပေါ် 2131
im update ကိုအသစ် plugin ကို, အသစ်နှင့် patch တွေနဲ့သို့သော်ထိုသည်ထင်ရှားခဲ့သည်. ကဖြေရှင်းပေးဖို့ပြောပြပါ.
ဇွန်လ 6, 2010 တွင် 2:04 နံနက်
သူတို့က admin ရဲ့အတွက်အမိန့်ထုတ်ခြင်းရှိဝစ်ဂျက်များဖြစ်ကြောင်းအဘယ်ကြောင့်? ထိုအဘယ်ကြောင့်ငါပြုပြင်ထုတ်တဲ့နောက်ဆုံး version အတွက်မူရင်းဘာသာပြန်ချက်အပေါ်မတတ်နိုင်?
ငါကြိုးစားခဲ့ 0.3.4 ဗားရှင်းနဲ့သူတို့ admin ရဲ့ရှိကောင်းရှိဝစ်ဂျက်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပေမယ့်ကျွန်မလည်းမပြန်ဆိုနိုင်ဘူး.
လာမည့်ဗားရှင်းပြီးသားမှားယွင်းငါသည်အဘယ်သူသည် သို့ဖြစ်. သင်တို့သည်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရမျှော်လင့်.
ဒါဟာ, အသုံးချအားငါရပါကြောင်းပါစေအရာအားလုံးအလုပ် 0.5.2 ဘက်ခြမ်းမှာဗားရှင်း, ဒါပေမယ့်ရှိဝစ်ဂျက်များအတွက်ပုံတစ်ပုံကဖော်ပြနေသည်အဖြစ်ရေးဖို့ error.
ဇွန်လ 6, 2010 တွင် 12:07 ညနေ
ငါသည်သင်တို့၏ပထမဦးဆုံးမေးခွန်းနှစ်ခုနားမလည်ကြဘူး, ဒါကြောင့်သူတို့ကို rephrase ကျေးဇူးပြုပြီး
ငါသည်လည်းသင်တို့ကိုတွေ့မြင်အမှားမရကြဘူး, ဒါဟာကျွန်တော့် code ထဲမှာဖြစ်မကြည့်ပါဘူး, ထိုသို့ဖြစ်လိမ့်မယ်ပေမယ့်, transposh ကိုပိတ်ထားတဲ့အခါဒီကွာသွားသလဲ?
ဇွန်လ 6, 2010 တွင် 9:43 ညနေ
ငါ့ english ငါသည်ဤအဘို့အသင်မေးဝမ်းနည်းပါတယ်င်နည်းနည်းဆင်းရဲသောသူသည်.
ထို transposh အရာအားလုံးအကျင့်ကိုကျင့်ထို့နောက်ကောင်းစွာပိတ်ထားပါက.
ကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံးမေးခွန်းဖြစ်ပါသည်: ထို transposh ကို enable လုပ်ထားပါကအဘယ်ကြောင့် admin ရဲ့မျက်နှာပြင်ရှိဝစ်ဂျက်များအလုပ်မလုပ်ပါဘူး?
ကျနော့်ရဲ့ဒုတိယဖြစ်ပါသည်: ကျနော်မှာကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဗားရှင်းသစ်အတွက်ဘာသာပြန်ရန်မနိုင်အဘယ်ကြောင့် 0.5.3 ကိုယ့်ပြင်ဆင်ရန်ဘာသာပြန်ချက်အသုံးပြုလျှင်?
ကျနော်ကိုအသုံးပြုရပါမည် 0.5.2 ငါသည်ဤအတူဘာသာပြန်ဆိုနိုင် becouse ဗားရှင်း.
သို့သော် enable default ဘာသာစကားဘာသာပြန်ချက်ငါ့ကိုသေးအမိန့်များထဲကတစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်အတူအဘယ်သူ workin မကဘာသေးသောကြောင့်သိတယ်.
ဇွန်လ 6, 2010 တွင် 10:05 ညနေ
1. ကျနော်တို့ admin ရဲ့ interface ပေါ်မှာက enable လုပ်ထားကြဘူး, ဒါကြောင့်လည်းအနည်းငယ်အကျိုးအတွက်သိပ်အလုပ်ဖြစ်လိမ့်မည်ကြောင့်, ကျွန်ုပ်တို့သည်အခြားထဲတွင်အချိန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ Preferences, (သောငါတို့သည်မျှော်လင့်) ပိုပြီးအရေးကြီးတဲ့လက္ခဏာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်
2. ရမယ်ဆိုရင်တော့မတူညီပါဘူး, ကျွန်တော်တစ်ဦး bug ကိုအဲဒီမှာရောက်ခဲ့တဲ့ခန့်မှန်း, 0.5.4 ရုံထဲကထွက်သည် – ဒါကြောင့်ကိုယ်တိုင်စမ်​​းသုံးကြည့်ပေးပါ
ဇွန်လ 6, 2010 တွင် 10:50 ညနေ
ကျွန်တော်ကြိုးစားသည် 0.5.4 ဗားရှင်းသို့သော်ကံမကောင်းစွာအဘယ်အရာကိုမျှပြောင်းလဲသွားပြီ.
ဇွန်လ 6, 2010 တွင် 10:51 ညနေ
ငါကြိုးစားခဲ့ 0.5.4 ဗားရှင်းသို့သော်ကံမကောင်းစွာဘာမှမပြောင်းလဲင်.
ဇွန်လ 7, 2010 တွင် 7:35 နံနက်
ဤကြီးစွာသော plugin ကိုအကြှနျုပျမကောင်းတဲ့အင်္ဂလိပ်များအတွက်ဝမ်းနည်းများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.
ငါသည်အ transposh နှင့်အတူပြဿနာတစ်ခုရှိသည်: ငါပို့စ်ကိုတင်စဉ်အခါ, ဘာသာစကားများဘာသာပြန်ရန်မပါဘူး.
ဒါဟာ link ကိုဖြစ်:
ဇွန်လ 7, 2010 တွင် 7:48 နံနက်
ငါသည်သင်တို့၏က်ဆိုက်အလုပ်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည်ကိုတွေ့မြင်, ဘာသာစကားအမျိုးမျိုးမှအလံများအပြောင်းအလဲကိုနှိပ်, ၎င်းဘာသာပြန်ပြီးစီးခြင်း,
ဇွန်လ 7, 2010 တွင် 8:04 နံနက်
ထိုပြန်ကြားချက်ကျေးဇူးတင် ofer …
ငါ command ကိုမေးသောအခါ “အားလုံး Translate” ငါပြီးအောင်မနိုင်.
ဇွန်လ 7, 2010 တွင် 8:09 နံနက်
ဒီ command နှေးကွေးနေ, Google ၏ server များထံသို့လည်းလမ်းကြောင်းများစွာဖန်တီးရှောင်ရှားရန်အလို့ငှာ. သင်တို့သည်လည်းပိတ်ဆို့နိုင်တယ်, တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားပြီး ip ကနေသုံးပြီးကြိုးစားကြည့်ပါ, သို့မဟုတ်ရိုးရိုးစောင့်ဆိုင်း.
ဇွန်လ 7, 2010 တွင် 8:27 နံနက်
ကျနော်လည်းတခြား link ကို add ဖို့ကြိုးစားခဲ့လုပ်မလုပ်ဘူး:
ငါ command ကိုကြပါစေ “အားလုံး Translate” ညဉ့်လုံးချောမဟုတ်ပါဘူး.
ဒါဟာ plug-in ကိုလုပ်ကွက်များဖြစ်ပုံရသည်.
ထို plug-in ကိုအများကြီးပိုမြန်မဖြစ်မီ.
ဇွန်လ 7, 2010 တွင် 9:17 နံနက်
တနည်းကား, ဒီ link ကိုကျင့်သောအကျင့်, ငါသည်သင်တို့ကိုတစ်ဦးကိုတခြားကွန်ပျူတာ / browser ကနေကြည့်ရှုခွင့်ကြိုးစားအကြံပြု. အားလုံးကိုလှူလိုသူများအ translate5တစ်ခုချင်းစီထားသောစာပိုဒ်တိုများဘာသာပြန်ချက်တို့အကြားစက္ကန့်, သင်ကပိုမြန်သွားလိုလျှင်, သင် code ကိုတည်းဖြတ်နိုင်သည်
သင်သည်ယုံကြည်လျှင်ထို site ကိုနှေးကွေးသည်, ဒီဖြစ်ကောင်းစစ်မှန်တဲ့ဖြစ်လိမ့်မည်, ဒါပေမယ့် APC ကို install လုပ်ဖို့အများကြီးအထောက်အကူပြု
ဇွန်လ 7, 2010 တွင် 9:54 နံနက်
အကူအညီများအတွက် Ofer ကျေးဇူးတင်ပါတယ် …
ဇွန်လ 7, 2010 တွင် 10:04 နံနက်
? php ၎င်း၏တစ်ဦးအရှိန်မြှင့်, နှင့် transposh database access ကိုရှောင်ရှားရန်အလို့ငှာအတွက်အသုံးပြု
ဇွန်လ 7, 2010 တွင် 1:07 ညနေ
ဇွန်လ 8, 2010 တွင် 1:27 ညနေ
ငါသည်အ transposh နှင့်အတူပြဿနာများရှိသည်ဆက်လက်.
ဇွန်လ 8, 2010 တွင် 2:00 ညနေ
သို့မဟုတ်ဤ link ကို:
ဇွန်လ 9, 2010 တွင် 8:33 နံနက်
ငါအုပ်ချုပ်ရေး panel ကနေ wp အားအသစ်သောပို့စ်ကဆက်ပြောသည် 2.9.2
Click တချက်နှိပ်လိုက်ရုံ “Refresh” ဘလော့ Post တွေကိုသိမ်းဆည်းဖို့, ထိုဘာသာပြန်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသို့သော် box ကို Transposh အတွက်ညွှန်းကိန်းဖမ်းဖြစ်ကြပြီးမရွှေ့ပါနဲ့.
ငါအသုံးပြုသူဘက်ခြမ်းကနေဘာသာပြန်ချက်စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာ, text ကိုဘာသာပြန်ထားသော, သို့သော်မူရင်းဘာသာစကားမှာကျန်ရှိနေသည်မဟုတ်.
ကျနော်လည်းတခြား browser ဖြင့်စမ်းသပ်ပြီး, ဒါပေမယ့်တူညီတဲ့လမ်းအတွက်အလုပ်လုပ်တယ်.
ဇွန်လ 13, 2010 တွင် 6:45 ညနေ
Excellent က Plug-in-
ဇွန်လ 14, 2010 တွင် 7:17 နံနက်
အဆိုပါညွှန်ကိန်းများအတွက် “Transposh box ကို” ပိတ်ဆို့ထားသည်နှင့်မရွှေ့ဘူး.
ငါ button ကို Click တချက်နှိပ်လိုက်ရုံ “အားလုံး translate” ၎င်းဘာသာပြန်စေခြင်းငှါမတတ်နိုင် (ညဉ့်တလျှောက်လုံးအသုံးပြု).
ရှေ့က “အားလုံး translate” ဝါကျဘာသာပြန်ထားသောခဲ့ကြ 197624, ပြီးနောက် 207311.
ငါသည်အဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအနည်းငယ် bug ကိုစဉ်းစား.
ဇွန်လ 14, 2010 တွင် 11:11 နံနက်
သင်သည်အကျိုးအပဲ့တွေအများကြီးကိုဘာသာပြန်ဆိုထားပါသည်, ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကို Google အင်ဂျင်ကိုဒီမှားယွင်းတဲ့လမ်းကိုတွေ့မြင်. ငါကွဲပြားခြားနားသောကွန်ပျူတာ / IP ကနေကြိုးစားနေ Suggest. ဒါဟာ source code ကိုတည်းဖြတ်ရအားဖြင့်ပိုမိုမြန်ဆန်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုလုပ်ဖို့လည်းဖြစ်နိုင်သည်.
ရော့ Dave ကပြောပါတယ်
ဇွန်လ 14, 2010 တွင် 10:14 နံနက်
မေးခွန်းတွေကကိုယ့်စုံတွဲတစ်တွဲ / ဖြစ်နိုင်အမှားအယွင်းများ:
– တစ်ခါတစ်ရံ url စနစ်တကျ translate ပါဘူး, ထို Permalink ကိုဘာသာ ပြန်. မရဘဲစာသားကောက်အဖြစ်ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်ရှိတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုပါပဲ (ပုံမှန်အားဖြင့်တစ်ဦးတည်းသာသို့မဟုတ်2URL ကိုစကား)? ကိုယ့်အခြားကြည့်ရှုခဲ့ကြပြီးကိုယ့်ပြဿနာကိုခေါင်းစဉ်စနစ်တကျဘာသာပြန်ထားသောမခံရဖြစ်ပါတယ်ထင် (ဤ Permalink ကောက်နေအဘယ်သို့ဖြစ်သကဲ့သို့) ပို့စ်ပြီးနောက် Permalink ပြောင်းလဲနေတဲ့အဖြစ်ခေါင်းစဉ် preview ဖို့အဲဒီကလမ်းတစ်ဦးနာကျင်မှုကိုဖြစ်ပါတယ်. ဒါ့အပြင်တခါတရံတွင်ထိုသို့သတ်မှတ်ချက်မှာ translate doesnt.
– ထို page source code ကိုပြင်ဆင်ရန်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိပါသလား (ဥပမာ meta ဖေါ်ပြချက်)
– သို့မဟုတ်ဆာဗာ Folder ပေါ်မှာတစ်နေရာရာမှာသိမ်းထားတဲ့တစ်ဦးချင်းစီစာမျက်နှာများတွင်များမှာထိုအရပ်၌ပြင်ဆင်စေနိုင်သည်ထို့ကြောင့်?
ဇွန်လ 14, 2010 တွင် 11:09 နံနက်
အဆိုပါတစ်ခါတစ်ရံ url သေးဘာသာပြန်ထားသောမဟုတ်ခဲ့ချိန်ဖြစ်ပါတယ်, သင်ပို့စ်အပေါ် translate ကို enable လုပ်ထားပါကအစားအလျင်အမြန်ဖြစ်ပေါ်လာသင့်ပါသည်, အားလုံးကိုအစအကျင့်ကိုကျင့် translate, သို့သော်ကံမကောင်းစွာနေဆဲဒီဘာသာပြန်ချက်ပြုပြင်ဖို့လမ်းမရှိ. အခြို့သောအနာဂတ်ကာလ၌ဖြစ်လိမ့်မည်😉
a nice များအပြင်တစ်ဦးကိုဖန်တီးရန်ဖြစ်စေခြင်းငှါ, 301 တုန့်ပြန် URL ကိုအတိအကျတိကျမှုမရသည့်အခါ, သို့သော်ဤတစ်လှည် patch ကိုဖြစ်မည်ဟုကျနော်တို့အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့စွမ်းအင်ကိုအာရုံစိုက်ဖို့လိုတဲ့သေချာမသိကြ.
အဆိုပါ meta ဖေါ်ပြချက်ကိုလည်းထားသောလျက်ရှိသည်, ယခုအဘို့အ plugin ကိုလုပ်နိုင်တဲ့ကဲ့သို့ကောင်း. အိုင်ဒီယာလာအနာဂတ် version တွင်ကျနော်တို့ page တွင်တည်ရှိကြောင်းသောသူအပေါင်းတို့သည်အကျိုးအပဲ့ကိုပြသနိုင်ဖို့ interface တစ်ခုမှာဖန်တီးပါလိမ့်မယ်ခြင်းဖြစ်သည်, ထည့်သွင်း meta.
တည်းဖြတ်တဲ့အတွက် server မှာသိမ်းထားတဲ့စာမျက်နှာမရှိပါ, သင်မူကား, အစဉ်အမြဲတိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်ချက်စားပွဲ Update လုပ်နိုင်ပါတယ်, ငါသည်ဤဖို့အထူးအကြံပြုလိုတယ်မည်မဟုတ်ပေမယ့်.
ဇွန်လ 14, 2010 တွင် 11:34 နံနက်
သင့်ရဲ့အဖြေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်. အဆုံးမှာ .html ဆိုတဲ့အချက်ကိုဘာသာပြန်ဆိုဖို့မပြီးခဲ့သည့်စကားလုံးဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ကြောင်းနိုင်? ဒါ့အပြင်ပြီးနောက်မပြောင်းပါဘူး Permalink ဘာသာပြန်ထားသော (ဥပမာတစ်ခု% ပို့စ်% အဖြစ်သုံးပြီးပြီးနောက် ) ငါရေးဆွဲရန်ပြန်ထားထပ်မံတင်ပို့ အကယ်. ဤလုပ်ငန်းလိမ့်မည်?
Transposh ဘို့ကိုလည်းဝစ်ဂျက် – ထိုအလံပိုမိုလွယ်ကူအညွှန်းများအတွက်စာမျက်နှာ၏ထိပ်ဖြတ်ပြီးပြေးသေးငယ်တဲ့ခေါင်းစဉ်အဖြစ်ပေါ်လာ everypage အပေါ်ဒါကြောင့်ထိပ်မှာ header ကိုအဖြစ်အပေါ်ရှိသည်ဖို့ဖြစ်နိုင်ပေသည်?
ဇွန်လ 14, 2010 တွင် 11:44 နံနက်
1. ဟုတ်ကဲ့, အ .html ဖြစ်နိုင်ကြားဖြတ်လိမ့်မည်
2. သူတို့အဖြစ်မကြာမီတစ်ဘာသာပြန်ချက်သူတို့အဘို့အတည်ရှိအဖြစ်ကိုပြောင်းလဲ, ရုံ reposting လုံလောက်တဲ့ပုံမှန်အားဖြင့်ကောင်းလှ၏, ဒါပေမဲ့ဘာသာပြန်ဆိုအားလုံးမည်သည့်နည်းဖြင့်မဆိုဖြစ်နိုင်ပိုကောင်းတဲ့ရွေးချယ်စရာဖြစ်ပါသည်
3. ငါကဖြစ်နိုင်ယူဆ, သငျသညျ code ကိုတစ်နည်းနည်း tweaks ရန်ရှိသည်စေခြင်းငှါ,
4. သင့်ရဲ့ wordpress ကိုစာမကျြနှာစာမျက်နှာများအဖြစ်ဘာသာပြန်ချက်စာမျက်နှာများကိုသိပ်စာမျက်နှာများ, ဒါကြောင့်သူတို့ကိုအစာမကျြနှာပျေါမှာဝဘ်ဆိုက် crawler ပေ့ဂျင်းလုပ်ခြင်းအားဖြစ်နိုင်စာမျက်နှာအဖြစ်စာမျက်နှာသူတို့ကိုပုံမှန်အားဖြင့်မျက်နှာမည်ဖြစ်ကြောင်းလိမ့်မည်
ဇွန်လ 29, 2010 တွင် 8:56 နံနက်
သင့်ရဲ့အဖြေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်. ရုံအချို့ထပ်မံစစ်ဆေးခြင်းကိုပြုမိနှင့်အတော်လေးအနည်းငယ်ရှိပါတယ် 404 တူမကွညျ့သောအမှားများ:
(URL ကို) /စိတျအပိုငျး / option ကို,com_frontpage / Itemid,1/သာ,က /
ငါမရှိဆက်ပြောသည်ပြီ 404 အမှားအယွင်းများ plugin ငါသည်ဤအလုပ်လုပ်တယ်မျှော်လင့်ပါတယ်.
ငါသည်လည်းအတော်လေးအနည်းငယ်ထပ်တွင် Meta ဖော်ပြချက်များနှင့်ခေါင်းစဉ် tags များလာပြီပါ၏ – ဒီပတ်ပတ်လည်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိပါတယ်?
ဇွန်လ 29, 2010 တွင် 9:35 နံနက်
အဆိုပါ meta ပြဿနာအပေါ်အလုပ်လုပ်ခဲ့နေပါသည်, ဒါကြောင့်စာမကျြနှာပျေါမှာရှိပြီးသားထားသောစာပိုဒ်တိုများကိုက်ညီလျှင်လည်းဘာသာပြန်ထားသောရရှိ, အနာဂတ်ဗားရှင်းဒီပိုကောင်းကိုင်တွယ်လိမ့်မည်.
ငါမရကြဘူး 404 အမှားများ, သူတို့အားဖြစ်ပျက်မနေသင့်, သငျသညျအကြှနျုပျကိုတကယ်သူတို့ကိုမြင်ချင်လျှင်မူကားငါဒီလိုမကောင်းတဲ့လင့်များဖန်တီးနေတဲ့ url ကိုမြင်ရန်လိုအပ်ပါတယ်
ဇွန်လ 29, 2010 တွင် 11:00 နံနက်
404 ရဲ့အားလုံးစုတခုစာမကျြနှာသို့ပြောင်းသွားကြသည်အဖြစ် redirect လုပ်ပေးခြင်း plugin ကိုအလှည့်ကွက်ပြု၏. ကြည့်ဖူး http://www.calabria2010.com/calabria/component/option,com_weblinks/task,view/catid,922/id,21/lang,it/
created နှင့်ယခု redirected စာမျက်နှာ၏ဥပမာတစ်ခုအဖြစ်.
meta ဘို့သကဲ့သို့ငါပထမဦးဆုံးကိုသုံး 160 အကောက်နုတ်ချက်များအတွက်ပို့စ်စကား – ငါပြဿနာဖြစ်စေခြင်းငှါအဘယ်မှာရှိသမျှသောတစ် seo အတွက်သုံးပြီးပါ၏. ဒါဟာတစ်ခါတစ်ရံဒီအရာရဲ့အချို့သောဘာသာပြန်ဆိုဒါပေမဲ့ပုံမှန်အားဖြင့်အားလုံးမဟုတ်က.
update ကိုမှမျှော်လင့်… ကျေးဇူးပါပဲ.
နိုဝင်ဘာလ 25, 2010 တွင် 6:06 ညနေ
hi ငါသည်သင်တို့၏ plugin ကိုကိုချစ်, ငါမူကားတစ်စာမျက်နှာနှင့်အတူပြဿနာတစ်ခုရှိခြင်းတာပါ: ထိုသို့နှင့်အတူလယ်သမား၏စျေးကွက်ဘာသာပြန်ထားသော ‘ အ url အပေါ်နိမိတ်လက္ခဏာ, ဒါကြောင့်ငါမှန်တယ်အလုပ်လုပ်ကနေစောင့်ရှောက်ထင်…
သငျသညျကို USA အလံပေါ်တွင်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်အမှားတွေ့နိုင်ပါသည် (အထက်ညာဖက်ထောင့်) ဒီ link ပေါ်တွင်:
မဆိုအိုင်ဒီယာငါသည်ဤပုံကို fix နိုင်? ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ဒေတာဘေ့စသို့မဟုတ် Transposh cache ကိုအပေါ်တစ်ခုခုထိ?
နိုဝင်ဘာလ 25, 2010 တွင် 7:03 ညနေ
ဒါကြောင့်အကြင်သူသည်ငါ၏ပြဿနာကိုဖြတ်ပြီးလာလျှင်, သင်မိတ္တူအတွင်းရှိထားသောစာပိုဒ်တိုများနှင့်အတူစမ်းသပ် post ကိုလုပ်သင့်, အဲဒါကိုထဲကပေယျာလယူဖို့အဘာသာပြန်ချက်ထားသောနှင့်ပြင်ပေးခဲ့ကြ, ဒါကြောင့်မူရင်းဘာသာပြန်ထားသောပို့စ်အတွက် URL ကို fix လိမ့်မယ်. ထိုထားသောစာပိုဒ်တိုများမှားဖွစျလိမျ့မညျကြောင့်သော်လည်းမစုံလငျင် (လယ်သမားများစျေးအစားလယ်သမားရဲ့ Market ကထွက်ခွာ) ဒါပေမယ့်တစ်ဦးအမြန်ပြင်ဆင်ချက်င်.
စိတ်ကူး Ofer များအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရမ်း.